UTed Lasso kunye no-Stillwater batyunjelwe iiMbasa zePeabody | Ndisuka mac
UTed Lasso kunye no-Stillwater batyunjelwe amabhaso ePeabody
Uchungechunge lweTed Lasso luye lwaba yi-pEyona mveliso iphumelele kwinkonzo ye-Apple yokusasaza ividiyo, uthotho oluqhubeka nokufumana amagama atyunjiweyo. Eli xesha limalunga neeMbasa zePeabody. Nangona kunjalo, ayinguye kuphela u-Apple TV + uthotho ofumene imvume kolu khuphiswano.
Amabhaso ePeabody ahlelwe nguMbutho weSizwe wabaSasazi kwaye ahlonipha ukugqwesa kunomathotholo nakumabonwakude ngendlela efanayo nePulitzers eyamkela ubuntatheli obubalaseleyo. Ezi mbasa zibonisa Ukucinezela imiba yezentlalo kunye nokuqaqambisa amazwi avelayo namhlanje.
Ngaphandle kukaTed Lasso, olunye uthotho olufumene ukonyulwa kweeMbasa zePeabody zalo nyaka luthotho lwabantwana Amabali amancinci e-zen (Amanzi amile). Zombini ezi nkqubo zikhethwe ngaphezulu kwama-60 abatyunjiweyo kwiinkqubo ezingaphezu kwe-1.30th ezisasazwa ngo-2020.
Umbutho wePeabody Awards ukhethe I-Ted lasso kuba "inika ithemba eligqibeleleyo kunye nokulwa netyhefu emadodeni." UTed Lasso ulandela umqeqeshi webhola osayinwe liqela lebhola laseNgilani, nangona engenamava.
Ezi mbasa zikwaqaqambise ukuzibophelela kuthotho lweeNcinci Zen Amabali e fundisa abantwana ukukhumbula. Le nkqubo isibonisa ipanda enobulumko enceda abantwana bazi kwaye baqonde iimvakalelo zabo kunye nezixhobo ezibanceda bajongane nemiceli mngeni yabo yemihla ngemihla.
Umbutho uyakwazisa abaphumeleleyo kolu khuphiswano ngoJuniKwimeko apho baya kubhiyozela khona. Olu ayilo thotho lokuqala lokufumana ukonyulwa kweeMbasa zePeabody. Kunyaka ophelileyo, uthotho lweDickinson lwafumana ukutyunjwa ngokuba "kukucinga ngokucinga ngobomi bobomi bembongi uEmily Dickinson."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTed Lasso kunye no-Stillwater batyunjelwe amabhaso ePeabody
NgeMacs entsha uApple uza kudlula kwiHP kwintengiso ye- "All in One"
Ngaba ungathanda ukuba iApple idibanise uyilo lweMac entsha kwiiMacBooks zonke?